Na-aga n'ihu eriri igwe na-enweghị onuete ịgbado ọkụ
■ SS 304 jikọtara ya na Pickling & Passivation
■ Direct Drive Fan na-echekwa Energy
Ronic Electronic De-scalar iji belata Fụda okirikiri
Pọrụ mmiri nke Ọrụ: A na-agbanye mmiri dị jụụ na ihe ntanye ndị na-agba agba n'elu eriri igwe na-ekesa ma kesaa ya na elu nke eriri igwe ahụ, na-akpụ ihe nkiri mmiri dị oke mkpa. Axial fan na-ebute ikuku site n'akụkụ. Ọ enhances ikuku eruba akpụ a na-ezighị ezi mgbali n'ime igwe, na-akwalite ala evaporation okpomọkụ na mmiri ịse evaporation, si otú amụba okpomọkụ dissipation si eriri igwe.
Mmiri na-ekpo ọkụ nke na-ewepu okpomọkụ.
Mmiri dị elu na-agbada site na eriri igwe, wee na-abanye na ikuku ọhụrụ. Nke a lowers mmiri okpomọkụ tupu ọ Nwela anakọtara na bezin n'okpuru.
Nke gara aga: Refrigeration Auxillary arịa
Osote: Emechiela Loop Cooling Tower - Cross Flow
Bac jụrụ Tower
Aplọ Elu Mmiri Evapco
Eke Natural Draft jụrụ Tower
Towerlọ Nche jụrụ Nuclear
Usoro jụrụ Tower
Water Ọgwụgwọ N'ihi Jụrụ Tower